Free Thinker: 2008
၂၊ ၃၊ ၃။ ITE (Institute of Technical Education)
စင်ကာပူတွင် လုပ်စားကိုင်စား၍ ရသော သင်တန်းများ အမြောက်အများ ရှိပါသည်။ မိမိလေ့လာလျှင် လေ့လာသလို တက်လမ်းများလည်း ရှိပါ၏။ ၎င်းကို Continuous Education ဟု ခေါ်ပါသည်။ ပိုက်ဆံမရှိလျှင်လည်း ကိစ္စမရှိပါ။ အလုပ်လုပ်ရင်း ညနေပိုင်း သင်တန်းများ တက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အခြေခံ ပညာတော့ ရှိထားမှ ရပါမည်။ သို့အတွက် မြန်မာပြည်မှ စင်ကာပူသို့လာလိုသူ လူငယ်များကို လောလောလတ်လတ် ပိုက်ဆံရရုံလောက် သာ သဘောမထားပဲ မိမိ၏ ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ အခြေခံပညာကို ကောင်းစွာတတ်မြောက်အောင် အလျင်သင်ကြားဘို့ ဖြစ်ပါသည်။ အနည်းဆုံး ဆယ်တန်းကို အမှတ်ကောင်းကောင်း၊ ဂုဏ်ထူးများများနှင့် အောင်အောင် ကြိုးစားကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုက်ဆံလိုချင် အလျင်လိုပြီး ဆယ်တန်းမှ အောင်အောင်မကြိုးစားချင်ပဲ ခုနစ်တန်းလောက်နှင့် ဆိုလျှင်တော့ တစ်သက်လုံး သူများခိုင်းတာပဲ လုပ်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ITE ပညာရေးမှာ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော သင်တန်းများထက် ပိုပြီး အခွင့်အလမ်းကောင်းသည် ဟု ဆိုချင် ပါသည်။ အထက်ပါ သင်တန်းများမှာ ရက်တိုတိုနှင့် ငွေပေါ်တက်သော သင်တန်းများဖြစ်ပြီး ITE ပညာရေးကိုမူ ရေရှည်အတွက် ရည်မှန်းသင့်ပါသည်။ ITE သင်တန်းပြီးသွားလျှင် မိမိ၏ကြိုးစားမှုပေါ်မူတည်ပြီး Polytechnic ဆက်တက်၍ ရပါသည်။ Poly မှ ကျောင်းပြီးသောအခါ မိမိ၏ကြိုးစားမှုပေါ်မူတည်ပြီး တက္ကသိုလ် ဆက်တက်၍ ရပါမည်။ သို့သော် တန်ဖိုးရှိသော မည်သည့်အရာကိုမှ လွယ်လွယ်နှင့် မရနိုင်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အပင်ပန်း၊ အဆင်းရဲ ခံပြီး ကြိုးစားမှ ရနိုင်ပါမည်။ စင်ကာပူတွင် ဇုံအလိုက် ခွဲခြားထားသော ITE ကျောင်းများ ရှိပါ၏။ ၎င်းတို့မှာ - 1. ITE College Central (စင်ကာပူ အလယ်ပိုင်းတွင် ITE ကျောင်း ၅ ကျောင်း ရှိပါသည်။)
2. ITE College East (အရှေ့ပိုင်းတွင်မူ တစ်ကျောင်းသာ ရှိပါ၏)။
10 Simei AveSingapore 486047
Telephone : (+65) 6544 9100
Fax : (+65) 6544 9111
General Enquiries / Services: college_east@ite.edu.sg
Student Admission Enquiries: training@ite.edu.sg
3. ITE College West (အနောက်ပိုင်းတွင် ကျောင်း ၅ ကျောင်း ရှိပါသည်။)
ITE ကျောင်းများတွင် အချိန်ပြည့် (Full Time) သင်တန်းများနှင့် အချိန်ပိုင်း သင်တန်းများ (Part Time) ဟူ ၍ ရှိရာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက်သူများအဖို့ Part Time သင်တန်းများက ပိုအဆင်ပြေပါသည်။ အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက်မည့်သူများအတွက် ဦးစားပေးဖော်ပြမည်ဖြစ်သဖြင့် Full Time သင်တန်းများကို ချန်လှပ်ခဲ့ပါမည်။
Part Time သင်တန်းများကို သုံးမျိုးသုံးစား ခွဲထားပါ၏။ ၎င်းတို့မှာ -
၁။ Skills Programmes (ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းများ)
Higher Nitec (Programmes for Higher National ITE Certificate)
Nitec & ISC (Programmes for National ITE Certificate and ITE Skills Certificate)
Short Courses (Continuing Training)
ITE Online Knowledge
WSQ (Singapore Workforce Skills Qualifications)
၂။ ReNEW Initiative
Fast Track (Programmes for intensive training and certification)
Post-Nitec (Programmes for continuing updating and upgrading)
Top-up Certification Scheme (Programmes for reskilling and conversion)
၃။ Academic Programmes
WISE (Worker Improvement through Secondary Education)
BEST (Basic Education for Skills Training)
Short Courses (Functional English)
Short Courses သင်တန်းများထဲတွင် အောက်ပါသင်တန်းများ ပါဝင်ပါ၏။ (အပြည့်အစုံ မဟုတ်ပါ။ စိတ်ဝင်စားမည် ထင်သည့် သင်တန်းများကိုသာ ရွေးချယ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်)။
v Automotive (မော်တော်ယာဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သင်တန်း)
v Building Services (အဆောက်အဦ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သင်တန်း)
v Computer-Aided Drafting (ကွန်ပြူတာဖြင့် ပုံဆွဲခြင်း သင်တန်း)
v Electrical & Electronics (လျှပ်စစ်)
v Healthcare (ကျန်းမာရေး)
v Information Technology (သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ)
v Mechanical & Mechatronics (စက်မှု)
v Precision Engineering
Nitec & ISC သင်တန်းများထဲတွင် အောက်ပါသင်တန်းများ ပါဝင်ပါ၏။ (အပြည့်အစုံ မဟုတ်ပါ။ စိတ်ဝင်စားမည် ထင်သည့် သင်တန်းများကိုသာ ရွေးချယ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်)။ သင်တန်းကြေးမှာ Nitec အတွက် Module တစ်ခုလျှင် S$993.00 ဖြစ်ပါသည်။ ISC အတွက် Module တစ်ခုလျှင် S$754.00 ဖြစ်ပါသည်။
v Nitec in Automotive Technology
v Nitec in Building Drafting
v Nitec in Communications Technology
v Nitec in Electrical Technology
v Nitec in Electronics
v Nitec in Mechanical-Electrical Drafting
v Nitec in Mechatronics
v Nitec in Mechanical Technology
v Nitec in Precision Engineering
v ISC in Electrical Wiring
Higher Nitec သင်တန်းများထဲတွင် အောက်ပါသင်တန်းများ ပါဝင်ပါ၏။(အပြည့်အစုံ မဟုတ်ပါ။ စိတ်ဝင်စားမည် ထင်သည့် သင်တန်းများကိုသာ ရွေးချယ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်)။
v Higher Nitec in Business-Information Technology
v Higher Nitec in Electronics Engineering
v Higher Nitec in Electrical Engineering
v Higher Nitec in Information Technology
v Higher Nitec in Mechatronics Engineering
v Higher Nitec in Mechanical Engineering
v Higher Nitec in Mechanical & Electrical Engineering Design
သင်တန်းအလိုက် Modules နှင့် သင်တန်းကြေးများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပညာအခြေခံ နည်းသူများအတွက်လည်း အခွင့်အလမ်းများ ဖွင့်ပေးထားရာ သာမန်ဆယ်တန်းအောင်ရုံမျှနှင့် ဘွဲ့ရ သည်ထိ မိမိကြိုးစားမှုအလိုက် တက်လမ်းရှိပါသည်။ မိမိစိတ်ဝင်စားရာ သင်တန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး ITE သင်တန်း ကို တက်ရောက် သင်ကြားပါ။ တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာပင် ထိုသင်တန်းနှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်နေသည့် အလုပ်ကို ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ရင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရယူရပါမည်။ ထိုအခါ လက်တွေ့မှလည်း အသိပညာ ဗဟုသုတများ ရမည်။ ထိုမှ တစ်ဆင့် ITE ပြီးသွားသောအခါ Polytechnic ဆက်တက်၍ ရပါမည်။ Polytechnic ပြီးလျှင် NTU, NUS စသည့် တက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက် ပညာသင်ယူကာ မိမိဘ၀တက်လမ်းကို မိမိဘာသာ ဖန်တီးယူနိုင်ပါသည်။
သို့သော် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သလို အလုပ်လုပ်ရင်း ပညာသင်ရမည်ဖြစ်ပေရာ အပင်ပန်းဒါဏ်ကိုတော့ ခံနိုင်ရပေ မည်။ ဤကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ ကျောင်းတက်ရင်းမှ ရာထူးကြီးများသို့ တက်လှမ်းသွားသူများလည်း မနည်းလှပါတော့ပေ။ သို့အတွက် နောင်လာနောက်သားများသည်လည်း မိမိတို့နောင်တော်ကြီးများကဲ့သို့ မိမိတို့ အနာဂါတ်ကို မိမိတို့ ဖန်တီး ယူနိုင်ကြပါစေသတည်း ဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။
Posted by အေးငွိမျး at 10:46 AM0comments Links to this post
၂၊ ၃။ ၀ပ်ပါမစ် ကိုင်ဆောင်သူ (Work Permit Holder) တစ်ဦး တက်ရောက်နိုင်သော သင်တန်းများ
၂၊ ၃၊ ၁။ BCA (Building Construction Authority) Academy မှ ပေးသော သင်တန်းများ အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများမှာ http://www.bca.gov.sg/academy/ မှ ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါ ၏။ ထိုလက်မှတ်ရပြီး လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သွားလျှင် သာမန်လုပ်သားဘ၀ထက် အများကြီးသာသွားသလို လခ လည်း ပိုကောင်းလာမည် ဖြစ်ပါ၏။ လုပ်ငန်းသဘာဝ နှင့် ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်ကာ လခ S$ ၈၀၀ မှ ၁၂၀၀ ထိ ရနိုင်ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် လုပ်သက်ရင့်လာသောအခါ Supervisor အဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးသောအခါ CSC (Certificate of Successful Completion) လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော် သင်တန်းတက်ချိန် ၇၅% ရှိရမည် ဖြစ်ပါ၏။ သင်တန်းကျောင်းတည်နေရာမှာ - BCA Academy 200 Braddell Road Singapore 579700 ဖြစ်ပြီး ဖုံးနံပါတ် (၆၅) ၆၂၄၈ ၉၈၆၈ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
GTI လက်မှတ်ရထားသူ၊ သိပ္ပံဘွဲ့ (B.Sc) ရထားသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက် နိုင်ပါ၏။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမည်ထင်သည့် အခြား Diploma/Specialist သင်တန်းများမှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသူ မည်သူမဆို တက်နိုင်ပါသည်။ (ဆယ်တန်းတွင် အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် သင်္ချာ ဘာသာရပ်တို့ကို သင်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ရမည်။) ဤသင်တန်းပြီးဆုံးပါက လခ ၁၈၀၀ နှင့် အထက် ရနိုင်ပါသည်။
အခြား Diploma သင်တန်း၊ Professionals သင်တန်း၊ Specialist သင်တန်းများလည်း ရှိပါသေးသည်။ http://www.bca.gov.sg/academy/Downloadforms.aspx တွင် ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါ၏။
၂၊ ၃၊ ၂။ NTUC Learning Hub မှ ပေးသော သင်တန်းများ
Trade Skill Courses (ဤသင်တန်းများ တက်ရန် အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်ရမည်)
သင်တန်းကျောင်း တည်နေရာမှာ -
16 Boon Lay WayTradeHub21#01-50Singapore 609965 ဖြစ်၏။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော Safety Assessor သင်တန်းများမှာ -
Manhole Safety Assessor Course (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း)
ဤလက်မှတ်ရလျှင်လည်း လခကောင်းကောင်း (S$2000 – 2500.00) ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤသင်တန်းတက်ရန် သိပ္ပံတွဲ (ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ၊ သင်္ချာ) များပါသော ဒီပလိုမာ သင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။ နောက်ထပ် လိုအပ်ချက်များမှာ Manhole နှင့်ပတ်သက်သော အလုပ်တွင် ၃ နှစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။ Safety Instruction Course (Manhole) for Supervisors နှင့် Building Construction Supervisors Safety Course များ တက်ခဲ့ဖူး ရမည်။ သင်တန်းချိန် ၂၂ နာရီ (၃ ရက်) ။
Confined Space Safety Assessor Course (သင်္ဘောကျင်း လုပ်ငန်း)
ဤလက်မှတ်ရလျှင်လည်း လခကောင်းကောင်း (S$2000 – 2500.00) ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤသင်တန်းတက်ရန် သိပ္ပံတွဲ (ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ၊ သင်္ချာ) များပါသော ဒီပလိုမာ သင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။ သင်တန်းချိန် ၃၀ နာရီ (၄ ရက် ခွဲ) ။
Shipyard Safety Assessor (Hot-Work Certification) (သင်္ဘောကျင်း လုပ်ငန်း)
ဤလက်မှတ်ရလျှင်လည်း လခကောင်းကောင်း (S$2000 – 2500.00) ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤသင်တန်းတက်ရန် သိပ္ပံတွဲ (ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ၊ သင်္ချာ) များပါသော ဒီပလိုမာ သင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။ သင်တန်းချိန် ၃၄ နာရီ (၅ ရက်) ။ ထိုသင်တန်းများအတွက် သင်တန်းကျောင်း တည်နေရာမှာ -
Employment and Employability Institute141 Redhill Road Block B.310Singapore 158828 ဖြစ်ပါ၏။
ဤ Safety သင်တန်းများကို တစ်ခုထဲတက်တာထက် အခြားသင်တန်းများပါ တက်ထားပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း ပိုကောင်းသလို ပိုကောင်းသော လခကိုလည်း ရနိုင်ပါသည်။ ဤသင်တန်းများနှင့် အတူ Safety Supervisor သင်တန်းကိုပါ တွဲဖက် တက်ထားသင့်ပါသည်။ အလျဉ်းသင့်၍ ဤနေရာတွင် Safety Supervisor သင်တန်းကိုပါ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ထိုသင်တန်းပြီးဆုံးပြီးနောက် Safety Supervisor အဖြစ်သာ အလုပ်ရပါက လခ S$ 2500 မှ S$3000 လောက်ရနိုင်ပါ၏။ သင်တန်းပေးသော ကျောင်းများမှာ များပြားလှပါဘိ။ စုစုပေါင်း ၁၅ နေရာ ရှိပါသည်။
အကုန်မဖော်ပြတော့ပါ။ ထင်ရှားသော နေရာအနည်းငယ်မျှသာ ဖော်ပြပါအံ့။ သင်တန်းအမည်မှာ -
Building Construction Supervisors Safety Course ဖြစ်ပါ၏။
1. BCA Academy of the Built Environment 200 Braddell Road Tel: (65) 6248 9999Website: http://www.bca.gov.sg/academy
သင်တန်းချိန် ၂၉ နာရီ၊ သင်တန်းကာလ ၄ ရက်၊ သင်တန်းကြေး ၂၈၃.၅၀ ဖြစ်ပါ၏။
2. Industrial Training Centre Pte Ltd39 Tuas Basin Link Tel: (65) 6863 4148Website: http://www.itc2007.com.sg E-mail: itc2007@singnet.com.sg
3. NTUC LearningHub Pte Ltd 25 Peck Seah StreetTel: (65) 6416 6611Website: http://www.ntuclearninghub.com E-mail: enquiries@ntuclearninghub.com
သင်တန်းချိန် ၃၂ နာရီ၊ သင်တန်းကာလ ၅ ရက်၊ သင်တန်းကြေး ၃၅၀.၀၀ ဖြစ်ပါ၏။
4. School of the Built EnvironmentSingapore Polytechnic, Continuing Education Centre (CEC)500 Dover Road Tel: (65) 6772 1288
သင်တန်းချိန် ၂၇ နာရီ၊ စုစုပေါင်း ၉ ချိန်၊ သင်တန်းကြေး ၂၉၉.၆၀ ဖြစ်ပါ၏။
Safety Supervisor အဖြစ် လုပ်သက်ရင့်၊ အတွေ့အကြုံများရလာပြီးသောအခါ နောက်တစ်ဆင့်အဖြစ် Safety Coordinator သင်တန်းကို တက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသင်တန်းတက်ရန် NTC2 သို့မဟုတ် GCE O အောင်ပြီး ဖြစ်ရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါ သင်တန်းတစ်ခုခုကို တက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
1. Building Construction Supervisors Course (BCSS)
2. Shipyard Safety Assistant Course (SSAC)
3. Shipyard Supervisors Safety Course (SSSC)
4. Basic Industrial Safety Course (BISH)
5. Oil/Petrochemical Supervisors Safety Course (OPSSC)
6. Construction Safety Course for Project managers
အကယ်၍ NTC2 သို့မဟုတ် GCE O အောင်လက်မှတ်မရှိပါက အထက်ဖော်ပြပါ သင်တန်း ၆ ခုအနက် တစ်ခုခု ကို တက်ထားပြီး Safety Supervisor အဖြစ် လုပ်သက် ၃ နှစ် ရှိရမည် ဖြစ်ပါ၏။ မြန်မာများအဖို့ ဆယ်တန်း အောင်ပြီး Safety Supervisor လုပ်သက် ၃ နှစ် ရှိလျှင် တက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ Safety Coordinator အလုပ်သာ ရပါက လခ ၄၀၀၀ ကျော်အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းချိန် - ၃၃ နာရီ၊ စုစုပေါင်း - ၄ ရက်။ သင်တန်းကြေး- ၃၈၈.၅၀။ သင်တန်းတည်နေရာမှာ -
BCA Academy ဖြစ်ပါသည်။ (အထက်တွင် ဖော်ပြပြီး)
Safety Coordinator အလုပ်တွင် လုပ်သက်ရလာပါက အကယ်၍ မိမိတွင် GTI လက်မှတ်လည်း ရှိထားမည် ဆိုပါလျှင် Safety Officer သင်တန်းကို ဆက်တက်ကာ လခ ၅၀၀၀ မှ ၇၀၀၀ ထိရနိုင်ပါသည်။ သင်တန်း အမည်မှာ Specialist Diploma in Workplace Safety and Health ဖြစ်ပြီး သင်တန်း ကာလ ၅ လ။ သင်တန်းချိန်စုစုပေါင်း နာရီ ၂၄၀။ သင်တန်းကြေး - ၄၄၉၄.၀၀။ သင်တန်း တည်နေရာ -
School of the Built EnvironmentSingapore Polytechnic, Continuing Education Centre (CEC)500 Dover Road Tel: (65) 6772 1288 ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသင်တန်းများအပြင် IT သမားများအတွက်လည်း အောက်ပါသင်တန်းများရှိပါသေးသည်။ IT သင်တန်း များမှာမူ အများအပြားရှိပါ၏။ စုစုပေါင်း သင်တန်း ၄၀ ရှိရာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပါသည်။
WSQ ESS Basic ICT Skills
WSQ ESS Workplace ICT Applications (Operations)
WSQ ESS Workplace ICT Applications (Supervisory)
National PCDT-ICDL Certificate in Using the Computer & Managing Files
National PCDT-ICDL Certificate in Word Processing (using MS Word)
National PCDT-ICDL Certificate in Spreadsheet (using MS Excel)
National PCDT-ICDL Certificate in Database (using MS Access)
National PCDT-ICDL Certificate in Presentation (using MS Powerpoint)
Microsoft Office Specialist Certification - Word 2003 (Core)
Microsoft Office Specialist Certification - Excel 2003 (Core)
Microsoft Office Specialist Certification - Access 2003
Microsoft Office Specialist Certification - Powerpoint 2003
Microsoft Office Specialist Certification - Word 2003 (Expert)
Microsoft Office Specialist Certification - Excel 2003 (Expert)
Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) - Word 2007
Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) - Excel 2007
Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) - PowerPoint 2007
Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) - Access 2007
WebPage Fundamentals using Microsoft FrontPage
WebPage Animation using Macromedia Flash
Website Design using Macromedia Dreamweaver
Website Authoring using Macromedia Dreamweaver
Building Website for e-Retailing and e-Shopping using Shopfactory
Digital Image Editing using Photoshop CS
Advanced Digital Image Editing using Photoshop CS
AutoCAD 2008 Essential
AutoCAD 2008 Advanced
AutoCAD 2008 - Creating and Presenting 3D Models
Autodesk 3D Studio Max for Design Visualization
Office Networking Course
Jumpstart to Visual Basic .Net
အသေးစိတ်ကိုမူ မဖော်ပြတော့ပါ။ http://www.ntuclearninghub.com တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Posted by အေးငွိမျး at 10:19 AM0comments Links to this post
၂၊ ၁။ မိမိအနာဂါတ်ကို မိမိဘာသာ ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း အပိုင်း (၁) တွင် စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်နေသူ သို့မဟုတ် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ အလုပ်လုပ် လိုသော မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်များ သိသင့် သိထိုက်သည့် ဗဟုသုတများကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ Project ပြီးခါနီး အလုပ်များကို နေ့မအား ညမအား လှိမ့်လုပ်ရလျှက် ရှိရာ စာရေးရန် အချိန် အလွန်နည်းပါးပါသည်။ သို့သော် အားသည့် အချိန်လေး များတွင် ဖြစ်စေ၊ အိပ်ချိန်များထဲမှ အနည်းငယ်ဖဲ့၍ ဖြစ်စေ ရသလောက် တက်သုတ်ရိုက် ရေး လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ သို့ဖြစ်ရာ ပြည့်စုံသင့်သလောက် ပြည့်စုံချင်မှ ပြည့်စုံပါမည်။ နောင် အချိန်ရလျှင် ထပ်မံ ဖြည့်စွက် ရေးသားပါဦးမည်။ ဥပမာအားဖြင့် အပိုင်း(၁) တွင် စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်သူများ Safety နှင့် ပတ်သက် ၍ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်း၊ နည်းလမ်းများကို လုံးဝ မဖော်ပြလိုက်ရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအကြောင်းအရာ မှာ အတော်များသည်ဖြစ်ရာ နောက်ထပ် အခန်းတစ်ခုအနေနှင့် သီးသန့်ရေးမှ ပိုမိုသင့်တော်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ပါတည်း။
ယခု အပိုင်း(၂) တွင် စင်ကာပူရောက် လူငယ်များအနေနှင့် မိမိတက်လမ်းကို မိမိဖာသာ ဖန်တီးယူလို့ ရနိုင် သော လမ်းစများကို ဖွင့်လှစ် ပြပါမည်။ စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်သူများ Safety နှင့် ပတ်သက် ၍ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်း၊ နည်းလမ်းများ၊ သိသင့် သိထိုက်သည့် အချက်အလက်များကို အပိုင်း (၃) တွင်လည်းကောင်း၊ မိမိ Supervisor ဖြစ်လာသောအခါ Supervisor တစ်ဦး သိသင့်သိထိုက်၊ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်၊ လေ့လာသင့်လေ့လာထိုက်သည့် တာဝန်၊ ၀တ္တရား၊ ဗဟု သုတများ (Soft skill) ကို အပိုင်း (၄) တွင် လည်းကောင်း ဆက်လက်ရေးသားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ သိထားသင့်သည်မှာ မိမိပညာအရည်အချင်း အဆင့်အတန်းနှင့် မိမိမည်မျှ လေ့လာတတ်မြောက် ထားသနည်း ဆိုတာ ဖြစ်ပါ၏။ ခုနစ်တန်းလောက်သာ တက်ဖူးသူတစ်ဦးအနေနှင့်တော့ သင်တန်းများ ဆက်လက် တက်ရောက်ရန် အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်အတန်း မီပါမည်လား ဟု မေးစရာ ရှိပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အဆင့် မမီပါပဲလျှက် သွားတက်လျှင်တော့ ကိုယ့် ဒုက္ခ ကိုယ်ဝယ်သလိုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဆယ်တန်းပညာအရည်အချင်း လောက် ရှိထားလျှင်မူ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဆယ်တန်းမည်ကာမတ္တ ဆိုလျှင်လည်း အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ သလို ငါ ဒီသင်တန်းကို တက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလျင် မေးခွန်းထုတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘွဲ့ရ ဆိုပြီးတော့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရမ်း အထင်မကြီး လိုက်ပါနှင့်။ မိမိဘယ်လောက် တတ်မြောက်ထားသည်ကို မိမိမှ လွဲ၍ မည်သူမျှ မသိနိုင်ပါ။
သို့အတွက် အကြံပေးလိုသည်မှာ သင်တန်းတစ်ခုတက်တော့မည် ဆိုလျှင် မိမိတက် မည့် သင်တန်းအကြောင်း ဦးစွာလေ့လာပြီး မိမိနှင့် သင့်တော်မည် ဆိုမှ လျှောက်ရန် ဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာများမှာ နားပါးသူ၊ သင်ယူတတ်မြောက်လွယ်သူများ ဖြစ်ပါ၏။ ထို့ပြင် အလုပ်ကို မခိုမကပ် ပဲ (တချို့ စုန်းပြူးများမှလွဲ၍) ကြိုးစားလုပ်ကိုင် တတ်ကြသူများလည်း ဖြစ်ပါ၏။ သို့အတွက် အခွင့်အလမ်းရှိသူများ သင့်တော်သော သင်တန်းများကို တက်ရောက် လေ့လာသင်ယူကာ မိမိတက်လမ်းကို ရှာဖွေနိုင်ကြပါစေသတည်း။
၂၊ ၂။ စင်ကာပူတွင် ရရှိနိုင်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် လခများကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ စင်ကာပူသို့လာရန် ကြိုးစားစဉ် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအကျော်က စင်ကာပူနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတ တစ်ပြားဖိုးမှ မရှိဟု ဆိုလျှင် လွန်မည် မထင်ပါ။ စင်ကာပူတွင် မည်သည့်အလုပ်အကိုင် များကို လခ မည်မျှနှင့် လုပ်လို့ ရနိုင်သည် မသိခဲ့ပါ။ ထို့ပြင် မည်သူတို့ လခ မည်မျှလောက်နှင့် လုပ်ကိုင်နေသည် ဆိုသည့် အဆက်အသွယ်လည်း လုံးဝမရှိခဲ့။ စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ကာလများကလည်း စင်ကာပူသို့ မြန်မာများ နည်းမျိုးစုံ၊ အဆင့်မျိုးစုံတို့တွင် လုပ်ခမျိုးစုံ နှင့် လာရောက်လုပ်ကိုင်နေမှန်း သိခဲ့သော်လည်း ထို ဗဟုသုတ များကို ထိုသူများသို့ ပြန်လည် ဝေငှရန် မစဉ်းစားမိခဲ့ပါ။ တနည်းအားဖြင့် ၀န်ခံရလျှင် ကျွန်တော်ကိုယ်နှိုက်လည်း မည်သည့်အလုပ်အကိုင်များကို လခမည်မျှနှင့် ရနိုင်မှန်း မသိခဲ့ပါ။ မိမိလုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်ကလေးတွင်သာ မှေးလုပ်နေခဲ့ပါသည်။ သို့အတွက် ယခု ကျွန်တော် သိရှိထားသလောက် လက်လှမ်းမီသမျှသော ဗဟုသုတ ကလေးများကို ပြန်လည် ဝေမျှပါမည်။ အကယ်၍ တစုံတရာ မှားယွင်းဖော်ပြမိခဲ့ပါလျှင် အချိန်မရွေး ကျွန်တော့်ထံ အကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးရန် ၀န်မလေးပါ။ ဤကဲ့သို့ ကျွန်တော်မှားနေသည်ကို ထောက်ပြခဲ့လျှင် အလွန်ကျေးဇူးတင် မည် ဖြစ်သလို ဤစာဖတ်သူများအတွက်လည်း အလွန် အကျိုးများမည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောလိုပါသည်။
စင်ကာပူတွင် ရနိုင်သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် မျှော်မှန်းလခများကို ကျွန်တော် သိသမျှ ပြန်လည် ဖောက်သည်ချ လိုက်ပါ၏။ အလုပ်အကိုင်၊ ရာထူးပင် တူသော်ငြားလည်း မိမိလုပ်ကိုင်နေ သည့် ကုမ္ပဏီ၊ မိမိ၏ ကျွမ်းကျင်မှု၊ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအလိုက် လခ ကွာသွားနိုင်ပါသည်။ တရားသေ မှတ်ထားလို့ မရပါ။ ဤတွင် ဖော်ပြထားချက်များသည် ပျမ်းမျှ ရနိုင်သော လခများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျွန်တော့်စာရင်းကို ပြည့်စုံသည်ဟု မမှတ်ယူစေလိုပါ။ အခြား ကျွန်တော်မသိသော အလုပ်များ နှင့် ရနိုင်သော လခများ အများအပြား ရှိနိုင်ပါသေးသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ခြုံပြောရလျှင် ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိ၊ ဘာပညာမှ မတတ်သူများ သည် တစ်ရက်လျှင် S$၁၄.၀၀ မှ ၁၆.၀၀။ ယခုမှ GTI ပြီးလာသူများ၊ ဘာမှ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများသည် တစ်ရက်လျှင် S$ ၂၀.၀၀ မှ ၂၄.၀၀။ IT နည်းနည်းပါးပါး အတွေ့အကြုံရှိသူများ လခ S$ ၁၀၀၀။ နည်းနည်း အတွေ့အကြုံရှိ လုပ်တတ်၊ ကိုင်တတ်သဖြင့် Supervisor လုပ်နိုင်လျှင် S$ ၁၂၀၀ မှ ၁၅၀၀ စသဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး သော သမ္ဘာရင့် Pipe Fitter များ သည် တစ်လလျှင် S$ ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ ထိ။ လုပ်သက်ရင့်ပြီး ဂဟေ ကောင်း ကောင်းဆော်တတ်သူ၊ မျိုးစုံ ဆော် တတ်သူ ( Arc Welding, TIG, MIG, FCAW) Welder ကြီးများသည် လခ S$ ၁၂၀၀ မှ ၁၈၀၀ ထိ ရနိုင်ပါ သည်။ သင်္ဘောကျင်းများတွင် လုပ်နေသူ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ welder များ(လုပ်သက် ဆယ်နှစ်ကျော်) ဆိုလျှင် အချိန်ပို လုပ်ခများပါ ထည့်တွက်လိုက်ပါ က တစ်လလျှင် ၂၀၀၀ မှ ၂၅၀၀ ထိ ရကြပါသည်။
စင်ကာပူရောက် မြန်မာ ခန့်မှန်း ၅ သောင်းခန့် အနက် မန်နေဂျာရာထူးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ၊ စီနီယာ အင်ဂျင်နီယာ၊ အင်ဂျင်နီယာ များစွာရှိပါသည်။ ထို့အတူ GTI ကျောင်းဆင်း Supervisor နှင့် လုပ်နေသူများ လည်း မနည်းလှပါ။ အချို့သည် လခ သောင်းကျော်ရရှိပြီး အများစုမှာ လခ ၂၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သာမန်အလုပ်သမား များမှာမူ လခ ၁၀၀၀ နှင့် အောက် စသဖြင့် အစားစား ရှိပါ၏။
လူချင်းအတူတူ၊ လက်မှတ်ချင်းအတူတူ၊ တတ်တာချင်း အတူတူ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာများမှာ အနှိမ်ခံ ဘ၀နှင့် လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ကိုယ်တွေ့ခံစားခဲ့ရသူ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ပြောပြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင် နာ့စ် (Nurse) နှင့် ပတ်သက်၍ ဒီပလိုမာ (Diploma) သုံးနှစ် သင်တန်းရော ဒီဂရီ (Bachelor of Nrusing) ၄ နှစ် သင်တန်းများပါ ပေးနေပါသည်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွင် ရရှိသောအမှတ်နှင့် ခွဲကာ အမှတ်မီသူများ တက်ခွင့် ရပါ သည်။ မြန်မာပြည်မှ ဒီပလိုမာ လက်မှတ်ရပြီး လုပ်သက်လည်း ၅ နှစ်နှင့် အထက်ရှိမည်ဆိုပါက စင်ကာပူတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်လို့ ရပါမည်။ သို့သော် စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင် စသည့်တိုင်းပြည်များမှ ဒီပလိုမာသမားများနှင့် ကွာ၏။ တော်တော်လေးကို ကွာပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဒီပလိုမာသမားများကို Nurse Aid (နာ့စ် အကူ) နှင့်သာ ခန့်ထားပြီး လခကိုလည်း S$၄၅၀ သာ ပေးပါသည်။ ထိုရာထူးနှင့် ၁ နှစ် တန်သည်၊ ၂ နှစ်တန်သည် လုပ်ပြီးမှ ကုမ္ပဏီ ထောက်ခံစာနှင့် Singapore Nursing Board မှကျင်းပသော စာမေးပွဲကို ၀င်ဖြေ။ ထိုစာမေးပွဲအောင်မှ Enrolled Nurse (EN) ဖြစ်လာကာ လခလည်း တိုးပေးပါသည်။ EN တစ်ဦးအနေနှင့် Nursing Home (ဘိုးဘွားရိပ်သာ ပဲ ခပ်လွယ်လွယ် ဆိုလိုက်ကြပါစို့) များတွင် အလုပ်ရလျှင် လခ S$ ၁၂၀၀ လောက် ရပါသည်။ ကံကောင်းထောက်မသဖြင့် ဆေးရုံများ တွင် အလုပ်ရပါမူ လခ ပိုကောင်းပါ၏။ S$ ၂၀၀၀ လောက်ထိ ရပါသည်။ EN ရာထူးနှင့် တစ်နှစ်လုပ်ပြီးလျှင် ကုမ္ပဏီ ထောက်ခံစာနှင့်ပင် စာမေးပွဲ ထပ်ဖြေကာ အောင်ပါက SRN (Singapore Registered Nurse) ဖြစ်လာပါသည်။ SRN ဖြစ်လာလျှင် လခ S$ ၂၅၀၀ နှင့် အထက် ရနိုင်ပါသည်။ ကွာပုံက ဖိလစ်ပိုင်မှ ခုမှကျောင်းဆင်းပြီး ဒီပလိုမာလက်မှတ် ကိုင်လာသူများကျတော့ ဘာမှမသိ၊ နားမလည် သေးသော်ငြား EN အဖြစ်ခန့်အပ်ကာ လခကိုလည်း S$ ၂၀၀၀ လောက်ထိ ပေးပါသည်။
မိမိမသိသဖြင့် များစွာသော အခွင့်အလမ်းတို့ ရှိပါလျှက် လက်ရှိဘ၀မှ မတက်နိုင်သူများ မှာလည်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိလေရာ ထိုသူများသည် ယခုစာဖတ်အပြီး လက်ရှိအဆင့်မှ ပိုမြင့်မားသော ရာထူးနှင့် လခများ ရရန် ကြိုးစားနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သာမန်အလုပ်သမား ဘ၀၌ တစ်ရက်လျှင် ၂ ကျပ်ခွဲ၊ သုံးကျပ်မျှသာ ရနိုင်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်ဆိုတတ်၊ ရေးတတ်ဖတ်တတ်သူ ဆယ်တန်းအောင် များသည် Signalling for Lifting Operation and Rigging Operation သင်တန်းကို ၃ - ၄ ရက်မျှ သွားတက် လိုက်ပြီး လက်မှတ် (certificate) ရလာလျှင် လက်ရှိလုပ်ခထက် ၃ ဆမျှ ပိုသော လုပ်ခကို အသာကလေး ရယူ နိုင်ပါမည်။ ထိုမှ လုပ်သက်ရင့်လာသောအခါ Lifting Supervisor သင်တန်းကိုဆက်တက်ပြီး လခ ၁၀၀၀ ကျော် ရသည်ထိ အခွင့်အလမ်း ပွင့်သွားမည် ဖြစ်ပါ၏။
Posted by အေးငွိမျး at 10:08 AM0comments Links to this post
Posted by အေးငွိမျး at 10:06 AM0comments Links to this post
၁၊ ၂၊ ၈။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရခြင်းအတွက် တောင်းခံနိုင်သော လျော်ကြေးများ
အလုပ်သမားတစ်ဦး အလုပ်ခွင်အတွင်း၍ မတော်တဆထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခဲ့ပါက လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ရန် MOM မှ အလုပ်သမား လျော်ကြေးဥပဒေ (Workmen’s Compensation Act) ကို ပြဌာန်းထားပါသည်။ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ထိုဥ့ဒေ လမ်းညွှန် http://www.mom.gov.sg/WICA Guide (English).pdf မှ ကောက်နှုတ် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၊ ၂၊ ၈၊ ၁။ မည်သူသည် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရခြင်းအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်သနည်း
အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့ပါက ဆေးကုသခြင်း အတွက် ကုန်ကျစရိတ်၊ ဆေးခွင့်ယူထားစဉ် ခံစားခွင့် နှင့် ပြန်မကောင်းနိုင်တော့သော ဒါဏ်ရာ ရခြင်းများအတွက် လျော်ကြေးများကို တောင်းခံနိုင်သည်။
၁၊ ၂၊ ၈၊ ၂။ လျော်ကြေးဥပဒေတွင် မည်သူတို့ အကျုံးဝင်သနည်း
Ø ကာယလုပ်သားများ (၀င်ငွေ မည်မျှရှိသည်ဖြစ်စေ)
Ø ဉာဏ လုပ်သားများ (၀င်ငွေ လခ S$ ၁၆၀၀ အောက် ရသူ)
မှတ်ချက်။ ။ မိမိကိုယ်မိမိ အလုပ်ခန့်ထားသူများ (Self-employed persons)၊ အိမ်ဖော်များ၊ စင်ကာပူ စစ်သား၊ ရဲ၊ မီးသတ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဝန်ထမ်း၊ အကျဉ်းထောင် ၀န်ထမ်းများ ဤ ဥပဒေနှင့် အကျုံးမ၀င်ပါ။
၁၊ ၂၊ ၈၊ ၃။ လစဉ် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (AME – Average Monthly Earining) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
လျော်ကြေးကိုတွက်ချက်ရာတွင် လစဉ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေပေါ် မူတည်ပြီး တွက်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် လစဉ် ပျမ်းမျှ ၀င်ငွေ (AME) ဆိုသည်မှာ မည်သည်ကို ခေါ်ပါသနည်း။ လစဉ် ပျမ်းမျှ ၀င်ငွေဆိုသည်မှာ ထိုသူ အလုပ်လုပ်ခဲ့သော လ စုစုပေါင်း ၀င်ငွေ ကို လအရေအတွက်နှင့် စား၍ ရသော ငွေပမာဏ ဖြစ်၏။ ထို စုစုပေါင်း ၀င်ငွေထဲတွင် အပိုကြေး (allowance)၊ အချိန်ပိုလုပ်အားခ(overtime payments)၊ bonuses များပါဝင်သည်။ သို့သော် CPF, လုပ်ငန်း သဘာဝအရ သူခံစားခွင့်ရှိသည့် အထူးခံစားခွင့်များ မပါဝင်ပါ။
၁၊ ၂၊ ၈၊ ၄။ မည်သည့်အခါတွင် လျော်ကြေး တောင်းခံနိုင်ခွင့်ရှိသနည်း
Ø မိမိသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် တရားဝင် အလုပ်ခန့်ထားစဉ် အလုပ်လုပ်နေစဉ် သို့မဟုတ် အလုပ်တာဝန် တစ်ခုခု ကို အလုပ်ချိန်ပြင်ပတွင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် (ဥပမာ - အရေးကြီးသဖြင့် ညဘက်တွင် တစ်နေရာသို့ ပစ္စည်းသွားပို့ရခြင်း) မတော်တဆ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြင်း
Ø ကုမ္ပဏီမှကားဖြင့် (အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကား၊ မီးရထားတို့ မပါဝင်ပါ) အလုပ်သွားစဉ် သို့မဟုတ် အလုပ်မှ ပြန်လာစဉ် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြင်း
Ø စင်ကာပူ အလုပ်ရှင်မှ ခန့်အပ်ထားပြီး စင်ကာပူတွင်နေထိုင်သော်လည်း အလုပ်တာဝန်အရ အခြားနိုင်ငံ သို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ထိခိုက် ဒါဏ်ရာရခြင်း - များအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ပါသည်။
၁၊ ၂၊ ၈၊ ၅။ မည်သည့် ခံစားခွင့်များ ရနိုင်သနည်း
(ဤခံစားခွင့်များသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် အကျုံးဝင်သည်)
၁။ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာဖြင့် ဆေးခွင့်ယူထားစဉ် (ပြင်ပလူနာအဖြစ်) ထိုဆေးခွင့်ယူနေစဉ်အတွင်း သာမန်လုပ်ခ
အပြည့်အ၀ ရရမည်။ (တစ်နှစ်လျှင် ယူခွင့်ရှိသော ဆေးခွင့် ရက်ပေါင်း - ၁၄ ရက်)
၂။ အကယ်၍ ဆေးရုံတက်ရပါက ထို ဆေးရုံတက်နေသော ရက်များအတွက် သာမန်လုပ်ခ အပြည့်အ၀ ရရမည်။ (တစ်နှစ်လျှင် ယူခွင့်ရှိသော ဆေးရုံတက်ခွင့် ရက်ပေါင်း - ၆၀ ရက်)
၃။ အကယ်၍ ရက်ရှည် ဆေးရုံတက်ရပါက သာမန်လုပ်ခ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ (အများဆုံးခံစားခွင့် ရှိသော ဆေးရုံတက်ရက်ပေါင်း - တစ်နှစ်)
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါ ခံစားခွင့်ရှိသော ဆေးခွင့်ရက်များတွင် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်၊ နားရက်၊ အလုပ်မလုပ်ရသော ရက်များ မပါဝင်ပါ။ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် အတွက် ရနေကျ ပုံမှန်လုပ်ခ ရ ရမည်
ဖြစ်ပါ၏။ ထိုခံစားခွင့် ရှိသော လစာကို ပုံမှန် လခထုတ်ရက်များထက် နောက်မကျစေဘဲ ထုတ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Ø ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရအပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ဆေးကုသစရိတ် (သို့မဟုတ်) အများဆုံး ဆေးကုသစရိတ် S$၂၅ ၀၀၀ ကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။
Ø အထက်ပါ ဆေးကုသစရိတ်အတွင်း အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ဆေးကုသခြင်းအတွက် ကုန်ကျ စရိတ်အားလုံးကို အလုပ်ရှင်မှ ကျခံရမည်။ အလုပ်ရှင်သည် ဆေးကုသရိတ်ကို ဆေးရုံသို့ တိုက်ရိုက် ပေးရမည်။
Ø ဆေးကုသ စရိတ် ထဲတွင် ဆရာဝန်ပြခ၊ ဆေးဖိုး၊ ဆေးကုသ ခံယူမှု၊ ခွဲစိတ်ခ၊ ဆေးမှတ်တမ်းခ စသည် အားလုံး ပါဝင်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ အလုပ်သမားသည် မိမိဆေးကုသစရိတ်အားလုံးကို ပြန်ရရန် တရားရုံး၌ တရားစွဲဆို တောင်းယူခွင့်ရှိပါ၏။ သို့သော် ဤကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုတောင်းယူလျှင် ထိုသူသည် ယခုဖော်ပြပါ လျော်ကြေး ဥပဒေနှင့် အကြုံးမ၀င် တော့ပါ။
၅။ တစ်သက်တာ မသန်မစွမ်းဖြစ်မှုအတွက် လျော်ကြေး
v အနည်းဆုံး ရနိုင်သော လျော်ကြေး = S$ ၆၀ ၀၀၀ x ၀င်ငွေ ဆုံးရှုံးမှု ရာခိုင်နှုံး
v အနည်းဆုံး ရနိုင်သော လျော်ကြေး = S$ ၁၈၀ ၀၀၀ x ၀င်ငွေ ဆုံးရှုံးမှု ရာခိုင်နှုံး
ရနိုင်သည့် လျော်ကြေး = လစဉ် ၀င်ငွေ x မြှောက်ဖော်ကိန်း x ၀င်ငွေရနိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးမှု ရာခိုင်နှုံး
(မြှောက်ဖော်ကိန်းကို အောက်ပါ ဇယားတွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။)
အကယ်၍ ဆရာဝန်က ထိုထိခိုက်ဒါဏ်ရာရသူသည် သူ့တစ်သက်တာပတ်လုံး အခြားသူများ၏ အကူအညီဖြင့် အသက်ရှင် နေထိုင်သွားရမည် ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက အထက်ဖော်ပြပါ ရပိုင်ခွင့်အပြင် အပိုဆောင်းငွေ ၂၅ ရာခိုင်နှုံး ပါ ထပ်လောင်း ရရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (The permanent total incapacity award will be 125%.)
၆။ သေဆုံးမှု အတွက် လျော်ကြေး
အကယ်၍ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှုဖြင့် သေဆုံးခဲ့ပါက သေဆုံးသူ၏ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုသည် လျော်ကြေးငွေ အနည်းဆုံး S$ ၄၇ ၀၀၀ မှ အများဆုံး S$ ၁၄၀ ၀၀၀ ထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၊ ၂၊ ၈၊ ၆။ မည်သည့်အခါတွင် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှုကို မည်သို့ သတင်းပို့ရမည်နည်း
၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် ပြဌာန်းသော Workplace Safety & Health (Incident Reporting) Regulation နှင့် Workmen’s Compensation Act တို့ အရ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်နေသည့် (ဆေးခွင့် ဆက်တိုက် ၃ ရက်ထက်ပိုယူရသော သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီ ဆေးရုံတက်ရသော) ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှု အားလုံးတို့ကို အလုပ်ရှင်သည် -
(၁) Ministry of Manpower သို့ လည်းကောင်း
(၂) Insurance Company (အာမခံ ကုမ္ပဏီ) သို့ လည်းကောင်း ဖြစ်ပျက်မှုအပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း သတင်း ပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ပထမအကြိမ် S$ ၅၀၀၀၊ နောက်ထပ် ကျူးလွန်မှုများ အတွက် S$ ၁၀ ၀၀၀ ထက်မများသော ဒါဏ်ငွေ သို့မဟုတ် ၆ လထက် မများသော ထောင်ဒါဏ် ကို အလုပ်ရှင်အား တပ်ရိုက်နိုင်ပါသည်။
၁၊ ၂၊ ၈၊ ၇။ အလုပ်ရှင်သည် မိမိအလုပ်သမားများအတွက် ထိခိုက်မှု အာမခံ ထားပေးရန် လိုပါသလား
အလုပ်ရှင်သည် မိမိအလုပ်သမားများအတွက် ဆေးအာမခံ ထားပေးရန် ဥပဒေအရ လိုကို လိုပါသည်။ အကယ်၍ အာမခံထားပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက အလုပ်ရှင်အား S$ ၁၀ ၀၀၀ ထက်မများသော ဒါဏ်ငွေ သို့မဟုတ် ၁ နှစ်ထက် မများသော ထောင်ဒါဏ် သို့မဟုတ် ထောင်ဒါဏ် ငွေဒါဏ် နှစ်ရပ်စလုံး တပ်ရိုက် နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအတွက် အာမခံထားပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက အလုပ်သမားတစ်ဦး ထိခိုက် ဒါဏ်ရာရခဲ့ပါလျှင် လျော်ကြေးကို မိမိပိုင် ဘဏ္ဍာငွေထဲမှ ပေးလျော်ရပါမည်။ ဤသို့ လျော်ကြေးပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက အလုပ်ရှင်အား S$ ၁၀ ၀၀၀ ထက်မများသော ဒါဏ်ငွေ သို့မဟုတ် ၁၂ လထက် မများသော ထောင်ဒါဏ် သို့မဟုတ် ငွေဒါဏ် ထောင်ဒါဏ် နှစ်ရပ်စလုံး တပ်ရိုက်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် ထိခိုက်မှု အာမခံထားပေးရန်ကိုမူ အလုပ်ရှင်၏ သဘောအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိခိုက်ဒါဏ် ရာ ရခဲ့ပါက မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေထဲမှ စိုက်ကာ ပေးလျော်ရမည် ဖြစ်ပါ၏။
အလွန် ရှုပ်ထွေးပွေလီလှသည့် မည်ကဲ့သို့ လျော်ကြေးတောင်းခံရမည် ဆိုသည့် အဆင့်များကိုမူ ချန်လှပ်ခဲ့ပါ မည်။ အသေးစိတ် သိလိုသူများ Workmen’s Compensation Act တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by အေးငွိမျး at 10:01 AM0comments Links to this post
၅။ ရုပ်ပိုင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်း ချို့ယွင်းနေသူ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများအတွက် - မိမိ သို့မဟုတ် မိမိအိမ်ထောင်ဘက်၏ ရုပ်ပိုင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်း ချို့ယွင်းနေသူ အောက်ဖော်ပြပါ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများ အတွက် တစ်ဦးလျှင် S$ ၃၅၀၀ နှုတ်ခွင့် ရှိသည်။
၁။ မိမိနှင့် တစ်အိမ်ထဲတွင် အတူနေထိုင်သူ
၂။ ၀င်ငွေ S$ ၂၀၀၀ ထက် မပိုသူ
၆။ အထက်ဖော်ပြပါ နှုတ်ပိုင်ခွင့်များအပြင် အောက်ပါတို့ကိုလည်း မိမိဝင်ငွေမှ နှုတ် နိုင်ပါသည်။
၁။ CPF (အများဆုံး နှုတ်နိုင်သော ပမာဏ - တစ်လလျှင် S$ ၄၅၀၀)
၂။ မိမိအတွက် သို့မဟုတ် မိမိအိမ်ထောင်ဖက်အတွက် အသက်အာမခံ (အသက်အာမခံကြေး၏ ၇ %)
၃။ မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော သင်တန်းတစ်ခုခုကို တက်နေလျှင် သင်တန်းကြေးကို (အများဆုံး S$ ၃၅၀၀ ထိ) နှုတ်နိုင်ပါသည်။
၄။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် အတူနေသူ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါက (သို့မဟုတ်) မိမိခင်ပွန်း စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရှိမနေပါက (သို့မဟုတ်) သားသမီးများနှင့် အတူနေသော တစ်ခုလပ် (သို့မဟုတ်) မုဆိုးမ ဖြစ်ပါက ထို အမျိုးသမီးသည် မိမိငှားရမ်းထားသော အိမ်ဖော်အတွက် ပေးဆောင်နေရသည့် levy ၏ နှစ်ဆကို နှုတ်နိုင်ပါသည်။
၁၊ ၂၊ ၅။ မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှု၊ သယ်ဆောင်မှု နှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု
နောက်တစ်ခု သိထားစရာ အရေးကြီးတာ တစ်ခုပြောချင်ပါသေးသည်။ စင်ကာပူတွင် သေဒါဏ်ပေးနိုင်သော ပြစ်မှု အကြောင်းဖြစ်ပါ၏။ Misuse of Drugs Act တွင် အောက်ပါ မူးယစ်ဆေးဝါးပမာဏ နှင့် အထက် ကို လက်ဝယ် တွေ့ရှိပါက သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ထားပါက သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်ပါက သို့မဟုတ် ရောင်းဝယ်ဖာက်ကားပါက သေဒါဏ်ပေးနိုင်သည် ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
ထို ဥပဒေ Schedule I နှင့် Schedule II တွင် တားမြစ်ထားသော ဓါတုဗေဒ ဆေးဝါးများ (Controlled Drugs) ကို ဖော်ပြထားပါ၏။ ဤနေရာတွင် သာမန်စာဖတ် ပရိသတ်တို့နှင့် မရင်းနှီးသော ဓါတုဗေဒ နာမည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါက စာရှည်ပြီး အလွန် ပျင်းစရာ ကောင်းမည်စိုးသောကြောင့် ထိုဆေးဝါးနာမည်များကို မဖော်ပြ တော့ပါ။ သိလိုသူများ အောက်ပါ Link သို့မဟုတ် Misuse of Drugs Act တွင် ဖတ်ရှုကြပါရန်။
ရည်ညွှန်း။ ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Misuse_of_Drugs_Act_(Singapore)
၁၊ ၂၊ ၆။ စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င် နေထိုင်မှု
Immigration Act (Chapter 133) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ (အခန်း ၁၃၃) အပိုဒ် ၆ တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ အတွင်း တရားမ၀င်နေထိုင်မှု အတွက် အောက်ပါအတိုင်း ပြဌာန်းထားပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း သို့အောက်ပါသူများသာ ၀င်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
၁။ သက်တမ်းရှိ ၀င်ခွင့်လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်ဝင်ခွင့် လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ
၂။ အထက်ပါ ၀င်ခွင့် / ပြန်လည်ဝင်ခွင့် လက်မှတ်ပေါ်တွင် ကိုင်ဆောင်ထားသူ၏ နာမည် ပုံနှိပ်ထားသူ
၃။ တရားဝင် ထုတ်ပေးထားသည့် သက်တမ်းရှိ pass တစ်ခုခု ကိုင်ဆောင်ထားသူ
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွါသည့်အခါ မိမိ၏ ပတ်စ်ပို့ နှင့်အတူ အထက်ပါ ၀င်ခွင့်လက်မှတ်၊ pass များကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။
အထက်ပါ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သူများအား - ၆ လထက်မများသော ထောင်ဒါဏ် နှင့် ၃ ချက်ထက် မနည်းသော ကြိမ်ဒါဏ် ကို ကျခံစေရမည်။ အကယ်၍ ထိုသူသည် ကြိမ်ဒါဏ်ပေးရန် မသင့်တော်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ထက် မများသော ဒါဏ်ငွေကို ပေးဆောင် စေရမည်။
၁၊ ၂၊ ၇။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်း ၀င်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ (အခန်း ၁၃၃) အပိုဒ် ၈ တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်း ၀င်ခွင့်မပြုနိုင်သူများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤနေရာတွင် သိသင့်သည့် အချက်အနည်းငယ်သာ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိလိုသူများ http://statutes.agc.gov.sg/ Immigration Act (Chapter 133) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
၂။ အများပြည်သူသို့ ကူးစက်စေနိုင်သည့် ရောဂါ ရှိသူများ
၃။ AIDS (ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါ) ခံစားနေရသူများ၊ သို့မဟုတ် HIV ဗိုင်းရပ် စွဲကပ်နေသူများ
၄။ ပြစ်မှုပြစ်ဒါဏ် ကျခံနေရသဖြင့် တိုင်းပြည်တွင်း ၀င်ရောက်မှု တားမြစ်ခံထားရသူများ
၅။ ပြည့်တန်ဆာများ နှင့် ပြည့်တန်ဆာ ခေါင်းများ
၆။ ဖုန်းတောင်း၊ ယာစကာများ .......... စသည်။
Posted by အေးငွိမျး at 9:52 AM0comments Links to this post
Posted by အေးငွိမျး at 9:43 AM0comments Links to this post
Posted by အေးငွိမျး at 9:19 AM0comments Links to this post
အကယ်၍ မိမိကိုယ်ကိုယ် စိတ်ချသဖြင့် သင်တန်းမတက်ပဲ တိုက်ရိုက် စာမေးပွဲပဲ ၀င်ဖြေမည်ဆိုလျှင် သင်တန်း ကြေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ၏။ စာမေးပွဲကတော့ တစ်ရက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၂ လ၊ ၃ လ ခန့် ကြိုတင် စာရင်းပေးထားမှ ကိုယ်လိုချင်သော အချိန်ကို ရနိုင်ပါမည်။
၂။ အထွေထွေ သိစရာ မှတ်စရာများ
စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့်အတွက် စင်ကာပူမှ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များကို အများကြီးမဟုတ်တောင် သိသင့် သိထိုက်သည်များကို သိထားမှ ရသင့်ရထိုက်သည်များကို ရမည် ဖြစ်ပါ၏။ မဟုတ် ပါက သူများပြောတိုင်း အဟုတ်မှတ်၍ ယုံနေရသည်နှင့် သူများဖြတ်တိုင်း ညာတိုင်း ခံနေရမည် ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် work permit သမားများသာမက အခြားသူများပါ သိနိုင်စေရန် Employment Act မှ ထုတ်နှုတ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါ သည်။
သို့သော် Employment Act တွင် လခ ၁၆၀၀ အောက်ရသူ ကာယလုပ်သားများ (နိုင်ငံသားဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်စေ) သာ ပါဝင်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ သူတို့ အကြုံးမ၀င်ပါ။
၁။ မန်နေဂျာ၊ ဒါရိုက်တာ စသည့် ရာထူးကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ
၂၊ ၁။ အလုပ်ချိန်၊ အချိန်ပို
တစ်ပတ်လျှင် ၃၅ နာရီထက် နည်းပြီး လုပ်ရသောသူများကို အချိန်ပိုင်း လုပ်သားအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
Employment Act အပိုင်း ၄ တွင် အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ သာမန်လုပ်ချိန်ကို တစ်ရက်လျှင် ၈ နာရီ။ (တနင်္လာမှ တနင်္ဂနွေ ထိ) ခုနစ်ရက် တစ်ပတ်လျှင် ၄၄ နာရီ အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ သို့သော် shift အဆိုင်းလိုက် လုပ်ရသူ များ မှာမူ တစ်ရက်လျှင် ၁၂ နာရီထိ လုပ်နိုင်သည်။ ရည်ညွှန်း - Employment Act အပိုဒ် ၃၈ (၄)
ထိုသာမန်လုပ်ချိန်ထက် ပိုပြီးလုပ်ရသမျှ အလုပ်ချိန်နာရီအားလုံးကို အချိန်ပို လုပ်အားခဖြင့်တွက်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုလုပ်ခမှာ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ထိ သာမန်လုပ်ခ၏ တစ်ဆခွဲ (1.5 times the normal wages) ဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနှင့် အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်များအတွက် နှစ်ဆ (double the normal wages) ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်း - http://www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/general/changes_to_employment_act/Public_Consultation_on_Proposed_Amendments_to_Employment_Act.html
၂၊ ၂။ အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်များ (Public Holiday)
ဤတွင် မည်သည့်ရက်များသည် အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက် (Public Holiday) များဖြစ်သည်ကို သိထားရန်လည်း လိုပါ၏။ စင်ကာပူမှ အများပြည်သူ ရုံးပ်ိတ်ရက်များမှာ (၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက်) –
၁။ New Year's Day - နှစ်သစ်ကူးနေ့ - (Thursday) 1 January 2009
ဤနေ့မှာ အပြောင်းအလဲမရှိ နှစ်စဉ် ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် အမြဲ ကျရောက်ပါသည်။
၂။ Chinese New Year - တရုပ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ - 26 January 2009 နှင့် 27 January 2009
ဤနေ့မှာ တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်မတူ။ နှစ်စဉ် ပြောင်းလဲနေပါသည်။
၃။ Good Friday – (Friday) 10 April 2009
၄။ Labour Day - အလုပ်သမားနေ့ - (Friday) 1 May 2009
ဤနေ့မှာ အပြောင်းအလဲမရှိ နှစ်စဉ် မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် အမြဲ ကျရောက်ပါသည်။
၅။ Vesak Day - ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ - (Saturday)9May 2009
၆။ National Day - အမျိုးသားနေ့ - (Sunday)9August 2009
ဤနေ့မှာ အပြောင်းအလဲမရှိ နှစ်စဉ် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် အမြဲ ကျရောက်ပါသည်။
၇။ Hari Raya Puasa - အစ္စလာမ် ဥပုသ်နေ့ - (Sunday) 20 September 2009
၈။ Deepavali - ဒီပါဝလီနေ့ - (Sunday) 15 November 2009
၉။ Hari Raya Haji - ဟာ့ဂ်ျနေ့ - (Friday) 27 November 2009
၁၀။ Christmas Day - ခရစ်စမတ်နေ့ - (Friday) 25 December 2009
ဤနေ့မှာ အပြောင်းအလဲမရှိ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အမြဲ ကျရောက်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ အကယ်၍ ရုံးပိတ်ရက်သည် တနင်္ဂနွေနေ့ (အမှတ်စဉ် ၆၊ ၇၊ ၈) တွင် ကျရောက်ပါက ထိုနေ့၏ နောက်တစ်ရက် တနင်္လာနေ့ကို ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
ရည်ညွှန်း - http://www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/general/2009_Public_Holidays.html
သို့သော် မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် တစ်ရက်လျှင် ၁၂ နာရီထက် ပိုပြီး မလုပ်ရ။ တစ်လလျှင် အချိန်ပို လုပ်ချိန် ၇၂ နာရီထက် မပိုစေရပါ။ ရည်ညွှန်း - Employment Act အပိုဒ် ၃၈ (၅)။
၂၊ ၃။ ခွင့်၊ ဆေးခွင့်၊ ဆေးရုံတက်ခွင့် နှင့် မီးဖွားခွင့် များ
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များတွင် အလုပ်မလုပ်ရပါက သာမန်လုပ်ခ(တစ်ရက်လျှင် ၈ နာရီလုပ်အားခ) ရရမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ အလုပ်လုပ်ရသည် ဆိုပါက သာမန်လုပ်ခ၏ နှစ်ဆရရမည် ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော် ကျွန်တော်နှင့် အလွန်ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများ လုပ်နေသော အချို့သော ကုမ္ပဏီများသည် ထိုရုံးပိတ်ရက်များတွင် နှစ်ဆ မပေးပဲ သာမန်လုပ်ခသာ ရသည်ဟု သိရ ပါ၏။ ထို့အတွက် ၎င်းတို့ ပြန်ခါနီး MOM တွင် တိုင်ပြီး ထိုလုပ်ခများကို ပြန်တောင်းပါဟု အကြံပေးရပါသည်။ ရည်ညွှန်း - Employment Act အပိုဒ် ၄၂။
၀န်ထမ်းတစ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လုပ်သက် သုံးလ ပြည့်ပြီးသည်မှ စ၍ အောက်ပါ လုပ်သက်ခွင့် (Annual Leave) ကို ခံစားခွင့် ရှိပါသည်။ ရည်ညွှန်း - Employment Act အပိုဒ် ၄၃။
အလုပ်စတင်ဝင်သည်မှ စ၍ ခံစားခွင့်ရှိသော လုပ်သက်ခွင့်
ပထမ နှစ် ၇ ရက်
ဒုတိယ နှစ် ၈ ရက်
တတိယ နှစ် ၉ ရက်
စတုတ္ထ နှစ် ၁၀ ရက်
ပဉ္စမ နှစ် ၁၁ ရက်
ဆဌမ နှစ် ၁၂ ရက်
သတ္တမ နှစ် ၁၃ ရက်
အဌမ နှစ် နှင့် အထက် ၁၄ ရက်
၀န်ထမ်းတစ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လုပ်သက် ခြောက်လ ပြည့်ပြီးသည်မှ စ၍ အောက်ပါ ဆေးခွင့် (Sick Leave) ကို ခံစားခွင့် ရှိပါသည်။ ရည်ညွှန်း - Employment Act အပိုဒ် ၄၄။
က။ ဆေးရုံမတက်ရပါက တစ်နှစ်ခံစားခွင့်ရှိသည့် ဆေးခွင့် - ၁၄ ရက်
ခ။ ဆေးရုံတက်ရပါက တစ်နှစ်ခံစားခွင့်ရှိသည့် ဆေးရုံတက်ခွင့် - ၆၀ ရက်
ဂ။ အကယ်၍ ဆေးရုံတက်ရသည့်ရက်ပေါင်းသည် ထိုနှစ်တွင် ၄၆ ရက်ထက်နည်းပါက ထိုနှစ်အတွက်
ခံစားခွင့် ရှိသည့် အများဆုံးဆေးခွင့် ရက်မှာ သာမန် ဆေးခွင့်ရက် ၁၄ ရက် + ဆေးရုံတက်ရက်
၀န်ထမ်းသည် ထိုဆေးခွင့်ယူထားသည့်ရက်များအတွက် သာမန်အလုပ်လုပ်ခ (၈နာရီခ)(allowance များမပါ) ကို ရရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ပိတ်ရက်နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များတွင် ဆေးခွင့်ယူလို့ မရပါ။)
မီးဖွားခွင့် (Maternity Leave) အမျိုးအစားများမှာကား များပြားလှပါဘိတောင်း။ သို့သော် အကျဉ်းချုပ်၍ ပြောရပါမူ -
၁။ မွေးဖွားလာသော ကလေးသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသား ဖြစ်သူ
၂။ ကလေး၏ မိဘနှစ်ပါးသည် တရားဝင် လက်ထပ်ထိမ်းမြား ထားသူ
၃။ ကလေးအမေသည် လက်ရှိအလုပ်ရှင်ထံ၌ ကလေးမီးမဖွားမီ ရက် ၉၀ အနည်းဆုံး
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ - ဖြစ်ပါက ကလေး၏ မိခင် သည် မီးမဖွားမီ ၄ ပတ်၊ မီးဖွားပြီး ၁၂ ပတ်။ စုစုပေါင်း
၁၆ ပတ် မီးဖွားခွင့် ခံစားခွင့် ရှိပါ၏။
ယေဘူယျအားဖြင့် ထို မီးဖွားခွင့် ၁၆ ပတ်ထဲမှ ပထမ ၈ ပတ်စာအတွက် လစာ အပြည့် ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော့် ရေးလိုရင်း ရည်ရွယ်ချက်မှ ဘေးချော် သွားမည် စိုးပါသဖြင့် အပြည့်အစုံ သိလိုသူများ အောက်ပါ web page တွင် ဖတ်ရှုကြပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါ၏။
Posted by အေးငွိမျး at 9:11 AM0comments Links to this post
Skill Evaluation Certificate (Knowledge) သင်တန်းများ
ထိုသင်တန်းများထဲမှ အချို့ကို မြန်မာပြည်တွင်ပင် တက်ပြီး ဖြေလို့ရသည်ဟု သိရပါသည်။ အသေးစိတ်တော့ မပါပါ။ သို့သော် ကုမ္ပဏီနာမည်များတော့ ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
၁။ ထက်ဦး - Teambuild Training and Test Centre
၂။ Khian Heng Test Centre
၃။ Tiong Seng Test Centre တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်တန်းနှင့် စာမေးပွဲများမှာ Low levy အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး အခြား လုပ်ကိုင်စား၍ ရသော သင်တန်းများ လည်း များစွာ ရှိပါသေး၏။ နောက်ပိုင်းတွင် မည်သည့်သင်တန်းများတက်ပါက မည်ကဲ့သို့အလုပ်များ ရနိုင်ပြီး ခန့်မှန်း လခ မည်မျှ ရနိုင်သည် ကို ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက် အသေးစိတ် ဖော်ပြပါမည်။
Posted by အေးငွိမျး at 9:06 AM0comments Links to this post
၁၊ ၅။ မည်သူများကို Skilled Worker (low levy) ဟု ခေါ်နိုင်သနည်း
ကျွန်တော်တို့ NTS များအနေနှင့် မိမိတို့လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် NTC-3 (Practical) Trade Certificate သို့မဟုတ် ITE’s Skills Evaluation Certificate (SEC Level 1) လက်မှတ်ရပြီးသူကို Skilled Worker (low levy) ဟု ခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်မည့်သူတစ်ဦးသည် ထိုလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားရန် လို၏။ ထိုလက်မှတ်သည် BCA (Building and Construction Authority) အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ဖြစ်ရမည်။ SEC (K) အတွက် စာတွေ့ရော လက်တွေ့ပါဖြေရမည် ဖြစ်ပြီး K မှာ Knowledge ဖြစ်၏။ ပြင်ဆင်လိုက်သော ဥပဒေအရ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စကာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသို့ အသစ် ၀င်ရောက်လာသူများ သည် မိမိတို့လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်နေ သည့် SEC(K) လက်မှတ် နှစ်စောင် ရမှသာ low levy အဖြစ် သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါ၏။
Singapore 579700 ဖြစ်ပြီး ဖုံးနံပါတ် (၆၅) ၆၂၄၈ ၉၈၆၈ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
BCA မှပေးသော SEC(K) သင်တန်းများမှာ -
Precast Concrete Components Erection
Autoclaved Aerated Concrete Precision Blocklaying
Suspended Ceilings & Drywalls (Acoustical)
Ducting Installation for Air-conditioning & Ventilation
Metal Scaffold Erection တို့ ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မိမိတတ်ကျွမ်းပါက သင်တန်းတက်စရာမလိုပဲ စာမေးပွဲ တိုက်ရိုက် ၀င်ဖြေလို့လည်း ရပါ၏။ သို့သော် အင်မတန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည် စိတ်ချမှ ဖြေတာကောင်းသည်။ မဟုတ်ပါက ပိုက်ဆံကုန်တာသာ အဖတ်တင်ပြီး အောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဖြေဆိုနိုင်သော စာမေးပွဲများမှာ -
Waterproofing (Felt System)
1. Metal Formwork
2. Steel Reinforcement Work
3. Timber Formwork
4. Interlocking Block Pavement Construction
5. Precast Concrete Components Erection
6. Underground Pipe Jacking Installation
7. Structural Steel Fitting
1. Metal Scaffold Erection
Plant & Related Trades
Jack-in Piling Operation တို့ ဖြစ်၏။
သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် သင်တန်းချိန်နာရီ၊ သင်တန်းကာလ၊ သင်တန်းကြေး စသည်တို့ ကွဲပြားသွား ပါသည်။ ဤသင်တန်းအားလုံးအတွက် အသေးစိတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ထပ်မံ သိလိုသေးသူများ ထိုကျောင်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://www.bca.gov.sg/academy/Downloadforms.aspx တွင် ၀င်ရောက် ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် အထက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာ၌ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Posted by အေးငွိမျး at 9:02 AM0comments Links to this post
Posted by အေးငွိမျး at 9:00 AM0comments Links to this post
၁။ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း
မသိသူကျော်သွား၊ သိသူဖော်စား။ ပညာရွှေအိုး၊ လူမခိုး ဟူသော စကားများမှာ သွေးထွက်အောင် မှန်လှပေ ၏။ ပညာနည်းနည်းတတ်လျှင် နည်းနည်းလောက် ဖော်စားလို့ ရမည်။ များများတတ်လျှင် များများ ဖော်စားလို့ ရမည်။ မည်သို့ ဖော်စားရမည်နည်း ဆိုသည်ကို စတင်ကာ ပြောပါတော့အံ့။ ဤတွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းအချက် အလက်များမှာ Singapore MOM website နှင့် အခြား သက်ဆိုင်ရာ Singapore Government website များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ မှ ထုတ်ယူ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ မူရင်းကိုဖတ်ရှုစေနိုင်ရန် ရည်ညွှန်း စာရင်းတွင် သီးသန့်ဖော်ပြထားပါ၏။
၁၊ ၁။ စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် Work Pass အမျိုးအစားများ
စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စင်ကာပူအစိုးရမှ ထုတ်ပေးသော Work Pass အမျိုးအစား ၉ မျိုး ရှိပါ၏။ ၎င်းတို့မှာ -
1. P and Q pass
3. R pass (Work Permit)
5. TEP (Training Employment Pass)
6. Dependent Pass / Letter of Consent (DP/LOC)
7. Long Term Social Visit Pass (LTSVP)
8. Miscellaneous Work Pass
9. Work Permit (Performing Artistes) တို့ ဖြစ်ပါ၏။
၁။ P and Q Pass
EP (Employment Pass) ကို လျှောက်ထားသူ၏ ပညာအရည်အချင်း၊ လုပ်သက်၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ လုပ်ငန်းသဘာဝ နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပေါ် မူတည်ကာ ချပေးပါသည်။ အနည်းဆုံး လခ တစ်လလျှင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ရ ရမည် ဖြစ်ပါ၏။
Personalised Employment Pass (PEP) - အဆင့်မြင့် ပညာတတ်ကျွမ်းသူများအတွက် မန်နေဂျာ၊ အထူး ကျွမ်းကျင်သူ စသည့် ရာထူးကြီးများတွင် အနည်းဆုံး လခ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၇၀၀၀ နှင့် အထက် ရသူများ သို့မဟုတ် ယခင်က P1 pass နှင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ ဖူးသူ များ အတွက် ထုတ်ပေးသော pass ဖြစ်၏။ P2 pass နှင့် အနည်းဆုံး ၂ နှစ်၊ Q1 Pass နှင့် အနည်းဆုံး ၅ နှစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပြီး တစ်နှစ်လျှင် လခ အနည်းဆုံး စင်ကာပူဒေါ်လာ သုံးသောင်း ထုတ်ယူ ရရှိခဲ့သူများ ဖြစ်ရမည်။ ထို pass သက်တမ်းသည် ၅ နှစ်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းထပ်တိုး၍ မရပါ။
၂။ S pass
ရသောလခ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ လုပ်သက် နှင့် လုပ်ငန်းသဘာဝ တို့ပေါ်မူတည်၍ အနည်းဆုံး လခ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ရသောသူများကို S pass ချပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းအင်အား၏ ၂၅ရာခိုင်နှုံးကို S pass ချပေးပြီး S pass တစ်ဦးလျှင် levy စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀ ပေးရပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လခ ၂၅၀၀ ကျော်ရပါက dependent pass လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၃။ R pass (Work Permit)
မကျွမ်းကျင်လုပ်သား သို့မဟုတ် အသင့်အတင့် ကျွမ်းကျင်သူ၊ S pass လျှောက်ရန် အရည်အချင်း မပြည့်မီသူ များအတွက် Work permit လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် မလေးရှား၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ တောင်ကိုးရီးယား နှင့် ထိုင်ဝမ်မှ အလုပ်သမားများကို ခန့်နိုင်ပြီး အခြားနိုင်ငံသားများကို လုပ်ငန်းအားလုံး တွင် ခန့်ထားနိုင်သည်။ ဤသို့ ခန့်ထားနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီတွင် သတ်မှတ်ထားသော ခန့်နိုင်ခွင့်နေရာများ ရှိရပါမည်။ အိမ်ဖော်များအတွက်လည်း work permit လျှောက်ထားနိုင်ပြီး သူတို့သည် dependent pass လျှောက်ထားနိုင်ခွင့် မရှိပါ။
ကော်ဖီဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ အနှိပ်ခန်း၊ ကာရာအိုကေဆိုင်၊ ငွေလဲလုပ်ငန်း နှင့် ကျူရှင်ဖွင့်ခြင်း နှင့် အလားတူ လုပ်ငန်းများမှ လွဲ၍ အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ဤ pass ကို လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၅။ TEP (Training Employment Pass)
စင်ကာပူကုမ္ပဏီများအနေနှင့် နိုင်ငံခြားရှိ မိမိတို့ရုံးခွဲများမှ ၀န်ထမ်းများကို သင်တန်းတက်စေရန် စင်ကာပူ သို့ ခေါ်လိုပါက ဤ pass ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများအနေနှင့် မန်နေဂျာ ကဲ့သို့သော ရာထူးကြီးများ အတွက်ရည်မှန်း လုပ်ကိုင်ရန် စင်ကာပူအစိုးရမှ လက်ခံနိုင်သည့် ဘွဲ့ရ၊ သို့မဟုတ် ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်ရပြီးသူများ သည် လခ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅၀၀ နှင့် အထက်ရနိုင်သည့်နေရာများအတွက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဘွဲ့မရသေးသူများ သည်များသည်လည်း အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုတွင် ဘွဲ့ရပြီးသည့်အခါ လုပ်မည့်အလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော ဘာသာရပ်ကို တက်ရောက်သင်ကြားနေသူ ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အကယ်၍ Training Employment Pass လျှောက်ရန် အရည်အချင်း မပြည့်မီပါက Training Work Permit(TWP) ကို သတ်မှတ်ထားသော ခန့်ထားခွင့် နှင့် levy များအရ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၆။ Dependent Pass / Letter of Consent (DP/LOC)
EP သို့မဟုတ် လခ S$2500 နှင့်အထက်ရရှိသော S Pass ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် မိမိတို့ ဇနီး၊ အသက် ၂၁ နှစ် အောက် အိမ်ထောင် မကျသေးသော သားသမီးများ၊ တရားဝင်မွေးစား သားသမီးများအတွက် Dependent pass လျှောက်ထား နိုင်သည်။ Dependent Pass ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် အလုပ်လုပ်၍ မရပါ။ သို့သော် EP များ၏ ဇနီး၊ သားသမီးများသည် Letter of Consent (LOC) လျှောက်ထားနိုင်ပြီး LOC ရသောအခါ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် S pass များ၏ ဇနီး၊ သားသမီး များမှာ မူ LOC မလျှောက်နိုင်ပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအရ P/Q/S/R Pass များ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၇။ Long Term Social Visit Pass (LTSVP)
P1 နှင့် P2 pass ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၏ မိဘများ၊ ယောက္ခမများ၊ မွေးစားသားသမီးများ၊ နောက် အိမ်ထောင်၊ ခြေလက်မသန်စွမ်းသူ သားသမီးများ သို့မဟုတ် အသက် ၂၁ နှစ်အောက် သမီးအပျိုများ အတွက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ထို pass ဖြင့် အလုပ်လုပ်၍ မရပါ။ အကယ်၍ ထို pass ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်လိုပါက ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအရ P/Q/S/R Pass များ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၈။ Miscellaneous Work Pass (MWP)
၂၀၀၈ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ - Immigration & Checkpoints Authority (ICA) မှ Professional Visit Passes (PVP) အား နိုင်ငံခြားသားများသို့ ထုတ်ပေးခြင်း ကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ ထို PVP အစား Miscellaneous Work Pass ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
စင်ကာပူသို့ ကိစ္စတစ်ခုဖြင့် ခေတ္တလာရောက်လိုသူများ ထို pass ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့ လာရင်း ကိစ္စပေါ် မူတည်ကာ အောက်ဖော်ပြပါ Pass အမျိုးအစား (A) , (B), (C) သုံးမျိုးအနက် သက်ဆိုင်ရာ pass ကို လျှောက်ထားရသည်။
(A)ဆီမီနာ (seminar) တက်ရောက်ခြင်း, ကွန်ဖရင့် (conference) တက်ရောက်ခြင်း, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
(workshop) များသို့တက်ရောက်ခြင်း ၊ ဘာသာရေးပွဲလမ်းသဘင်များ သို့မဟုတ် လူမျိုးစု ပွဲလမ်းသဘင်
(B) တရားပွဲများ၊ တရားဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန် ကြွရောက်ခြင်း
(C) နိုင်ငံခြား စာ၊ နယ်၊ ဇင်း သတင်းထောက်များ နှင့် အဖွဲ့များ လာရောက်ခြင်း
၉။Work Permit (Performing Artistes)
ထိုမျှသာ မကသေး။ နိုင်ငံခြားသား အနုပညာရှင်များအနေနှင့် မိမိတို့ အနုပညာပြကွက်များ (Performance Art) ကို နိုက်ကလပ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကလပ်များတွင် ပြသရန် ယခင်ကထုတ်ပေးခဲ့သော Professional Visit Pass ကို ထုတ်မပေးတော့ပဲ ထို pass အစား Work Permit (Performing Artistes) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။
နောက်တစ်မျိုးမှာ Employment Pass Eligibility Certificate (EPEC) ဖြစ်ပါသည်။ စင်ကာပူအစိုးရမှ ရွေးချယ်ထားသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိလာသူတစ်ဦး သည် ဤ EPEC ကို လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဤလက်မှတ်ရပါက စင်ကာပူတွင် အလုပ်ရှာရန် တစ်နှစ်နေခွင့် ရှိပါသည်။ သို့သော် ဤလက်မှတ်ဖြင့် အလုပ်လုပ် ၍တော့ မရပါ။ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းသည်မှာ သူတို့ရွေးချယ်ထားသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တက္ကသိုလ် အများအပြား ထဲတွင် မြန်မာပြည်မှ တက္ကသိုလ်နာမည် တစ်ခုတလေမှ မပါခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သီရိလင်္ကာ မှ တက္ကသိုလ် ၈ ခု၊ ထိုင်း မှ တက္ကသိုလ် ၅ ခု နှင့် ဗီယက်နမ် မှ တက္ကသိုလ် ၆ ခုတို့ အပြင် အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံများ မှ တက္ကသိုလ် များ ပါဝင်ပါသည်။
ပညာတတ်သူများသည် မိမိတို့သိလိုသည်ကို MOM website http://www.mom.gov.sg တွင် မိမိဖာသာ ဖတ်ရှု နိုင်သည်ဖြစ်၍ ဤတွင် ချန်လှပ်ခဲ့ပါအံ့။ ဤနေရာတွင်မူ အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မဖတ်တတ်သူ၊ အင်တာနက် သုံးရန် အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ဦးစားပေး ရေးမည်ဖြစ်၍ S pass နှင့် Work permit များ အကြောင်း ဦးစားပေး ရေးသွားပါမည်။
Posted by အေးငွိမျး at 8:59 AM0comments Links to this post